यसरी हुन्छ ग्यासटाइटिस पछि अल्सर » खबरहरुको एउटै केन्द्र
यसरी हुन्छ ग्यासटाइटिस पछि अल्सर
शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १४:२९ मा प्रकाशित !
नेपालका अधिकांश मानिसमा ग्यास्ट्राइटिसको समस्या देखिन्छ । यसको सबैभन्दा उत्तम उपचार भनेकै स्वस्थ जीवनशैली हो । यसका लागि स्वस्थ आहार र उपयुक्त पोषण तत्वयुक्त खाद्यपदार्थको प्रयोग गर्नुपर्छ । सुरुवाती समयमै उपचार गरेमा चाँडै निको पनि हुन्छ । तर, पछिसम्म हेलचेक्र्याइँ गरेमा गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउने गर्छ ।
पेटको आन्द्राको लेयरमा इन्फेक्सन हुनुलाई ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ । पेटमा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी कीटाणुले संक्रमण गरेपछि यस्तो ग्यास्ट्राइटिसको समस्या निम्तिने गर्छ ।
ग्यास्ट्राइटिस भएमा पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने, पेट पोल्ने, ढुस्स हुने, खानामा रुचि नहुने, पिसाब कालो बग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छ । मानसिक तनाव, स्ट्रेसलगायतका कारण पनि ग्यास्ट्राइटिसको समस्या हुन्छ ।
ग्यास्ट्राइटिसको समस्यालाई हेलचेक्र्याइँ गर्दा खतरनाक समस्या पनि निम्तिन सक्छ । त्यसमध्येको एउटा समस्या हो, अल्सर । अल्सर भनेको आमाशयमा हुने एक प्रकारको घाउ हो । सही उपचार नगर्दा ग्यास्ट्राइटिस भएको एक महिनामै अल्सर हुन सक्छ ।
ग्यास्ट्राइटिसको समस्यालाई राम्रोसँग समाधान गर्न नसकेमा आन्द्रामा प्वाल पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । ग्यास्ट्राइटिस भएको थाहा पाउनेबित्तिकै खानपान र उपचारमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । ग्यास्ट्राइटिस हुँदा पनि राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसकेमा पियोजन हुन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा आन्द्रा चिथोरिएजस्तो हुन्छ । बिस्तारै आन्द्रामा प्वाल नै पर्छ । यस्तो समस्या अल्सरको विकसित रूप हो ।
ग्यास्ट्राइटिसको भयावह रूप हो, क्यान्सर । ग्यास्ट्राइटिसको समस्याले आन्द्रा वा आमाशयको मात्र क्यान्सर हुँदैन, यसले त घाँटीदेखि मलद्वारसम्मको क्यान्सर हुन सक्छ । अल्सर हुँदासमेत आफ्नो स्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा यस्तो समस्या निम्तिने गर्छ ।
अन्य समस्याले ग्यास्ट्राइटिस लक्षण
कहिलेकाहीँ अन्य रोगले पनि ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण देखाउँछ । जस्तो कि मुटुसम्बन्धी रोगले पनि ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण देखाउने गर्छ । हृदयाघातले जसरी छाती दुखाउँछ, ग्यास्ट्राइटिसले पनि त्यसरी नै दुखाउने गर्छ ।
प्यान्क्रियाटाइटिसले पनि ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण देखाउने गर्छ । शरीरको प्यान्क्रियाज ग्रन्थिमा संक्रमण हुँदा यस्तो समस्या हुन्छ । पित्तथैलीको समस्याले पनि ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण देखाउन सक्छ । यस विषयमा सजग नहुँदा ज्यान नै जान सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्राइटिसको लक्षणलाई राम्रोसँग पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ ।
ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएकाले हरियो सागसब्जी, तरकारी, फलफूल, उच्च गुणस्तरको प्रोटिन, स्वस्थकर फ्याटलगायतका डाइट प्रयोग गर्नुपर्छ । ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएकाले एसिडिक, मसलेदार, अत्यधिक तातो खानेकुरा, रक्सी, चिया, कफी, प्याकेटमा पाइने खाद्यपदार्थको सेवन गर्नुहुँदैन । फास्टफुडको प्रयोगले पनि ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ ।
मांसाहारी खाना पचाउन शरीरलाई लामो समय लाग्छ । अझ रातको समयमा त ननभेज खानाबाट जतिसक्दो बच्नुपर्छ ।
कमजोर पाचन शक्ति भएका मानिसले मैदाबाट बनेको खाद्यपदार्थ खानु निकै घातक हुन्छ । ब्रेड, पिज्जाजस्ता खाद्यपदार्थले पाचन प्रक्रियामा असर पार्छ, जुन ग्यास्ट्राइटिसको कारण बन्छ ।
कुनै पनि एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्टका कारण पेटमा स्वस्थ ब्याक्टेरियाको कमी हुन जान्छ । जसले पाचन प्रक्रियालाई समेत बिगार्छ र पेटमा ग्यास बन्न सुरु हुन्छ ।
छोटो–छिटो र नचपाई खाँदा ग्यास्ट्राइटिसको समस्या निम्तिन्छ ।
पेटमा स्वस्थ र अस्वस्थ ब्याक्टेरिया हुन्छन् । यस्ता ब्याक्टेरियाको ब्यालेन्स नमिल्दा पनि ग्यास्ट्राइटिसको समस्या उत्पन्न हुन्छ । लसुन, प्याजजस्ता तरकारीलाई सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा पनि ब्याक्टेरियाको ब्यालेन्स बिग्रन सक्छ ।
कब्जियतको समस्याले शरीरमा भएको टक्सिन्स बाहिर आउन सक्दैन । जसका कारण पेटमा ग्यास बन्न थाल्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: चलचित्र ‘यो माया कस्तो माया’को रोमान्टिक गीत सार्बजानिक (भिडियो सहित)
NEXT POST Next post: समय सिमा भित्र काम नसक्ने काठमाडौंका ३ सय आयोजनाका ठेकेदारहरु गृह मन्त्रालयको कारबाही सूचीमा(नाम सहित हेर्नुस )
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १४:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १४:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १४:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १४:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १४:२९